​ေယာ္​ဒန္​ — Steemit
1980 ခုနှစ်, Nike ကမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ရဲ့ Air ကိုယော်ဒန်မြစ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ "Sneaker ယဉ်ကျေးမှု" ကိုဖွင့်ကူညီပေးခဲ့သည်။
"Sneakerheads" စုဆောင်းကန်ဘောကျော် obsessive သူတွေကိုတစ်ဦး $ 1 ဘီလီယံ Sneaker Reseller ပေးတဲ့စျေးကွက်မွေးဖွားယနေ့အကူအညီနဲ့လောင်စာခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေသမိုင်းကြောင်းအထွက်ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါအားကစားအမှတ်တံဆိပ် Unlaced, ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမတ်လ 27 ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်လိမ့်မည်ဟုအမျိုးသမီး Sneaker ချစ်သူများများအတွက်ပြတိုက်မှူးဦးတည်ရာနဲ့ fix ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "Sneaker ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းဂန္ဖိနပ်တစ်အများစုနှင့်အတူပြဿနာများ၏အပိုင်းကိုသူတို့သမိုင်းမှသာယောက်ျားရဲ့အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ Sneaker မှာယဉ်ကျေးမှု၏ထ: ဒါကြောင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အမျိုးသမီး '' sneakerheads '' အဘို့အခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, "အဲလစ်ဇဘက် Semmelhack, တိုရွန်တိုရဲ့ Bata ဖိနပ်ပြတိုက်နှင့် Box ကိုအထဲက၏ရေးသားသူမှာအကြီးတန်းမှူးကပြောပါတယ်။ "Serena Williams ဟာနဲ့တူ Fantastic အရေးကြီးသောအမျိုးသမီးအားကစားသမား, Sneaker ယဉ်ကျေးမှု၏အထွတ်အထိပ်မှာဖြစ်ထိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါငါကြောင့်အမျိုးသမီးလိုလားစပ်လျဉ်း athleticism နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အီ၏ရောင်ပြန်င်ထင်ပါတယ်။ " အခုတော့တော်တော်များများကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် - ပွဲတစ်ပွဲအဘယ်သူအားမျှပိုကြီး Nike ကထက်သို့သော်လျင်မြန်စွာပြုမူသို့မဟုတ် ပို. ပို. အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီး activewear နှင့်အားကစားဖိနပ် options များနှင့်အတူတင်ပြခံရကြသူဖောက်သည်များဆုံးရှုံးရင်ဆိုင်ရရမယ်တဲ့သူ။
Unlaced တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည် "မိန်းမတို့အဘို့စိတ်ကူးယဉ် Sneaker ဦးတည်ရာကို," မေီ Montagne မှာ, ဒုသမ္မတနှင့် Nike ကအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ General Manager ကပြောပါတယ်။ Unlaced ပြီးခဲ့သည့်လကရဲ့ပဲရစ်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်နှင့် (Air ကိုဂျော်ဒန်နှင့်လေတပ် 1s လိုမျိုး) Nike ကရဲ့အကျော်ကြားဆုံး Sneaker အချို့ကိုအပေါ် unisex ဆိုက်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ i-D ကိုဖက်ရှင်အယ်ဒီတာဂျူလီယာ Sarr-Jamois တူသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအွန်လိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များနှစ်ဦးစလုံးကို run သောထုတ်ကုန် curate မည်, နှင့်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ဂန္သင်တန်းဆရာအချို့ကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့အမျိုးသမီးဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
"အမြိုးသမီးမြားကိုအမြဲ Sneaker ကိုချစ်၏။ ကျနော်တို့အားကစားကနေလမ်းမှမြင်နေပါတယ်နှင့်ယခု, အမျိုးသမီး Sneaker ယဉ်ကျေးမှုကယ့်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရှိန်မြှင့်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Montagne မှာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုများအတွက်အတားအဆီးအချို့ကိုဖယ်ရှားပါတယ်။ " Nike က၏ Courtesy သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီး Sneaker အကြီးအကဲများအာရုံစိုက်ဖို့ Nike ကကဲ့သို့ကြီးမားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့တာလဲ 2005 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး 2014 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိုယူတဲ့သူ Montagne မှာ, အမှတ်တံဆိပ်အမြဲအမျိုးသမီးအားကစားသမားဝန်ဆောင်မှုပေး, ဒါပေမယ့်စတိုင်ပစ္စည်းများအဖြစ် Sneaker ပိုရွေးချယ်စရာပူဇော်လိုခဲ့ပြောပါတယ်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Sneaker အရှိဆုံးအထူးပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်Célineရဲ့လေတပ် 1-မှုတ်သွင်းဖိနပ်နှင့်အတူ High-ဖက်ရှင်ပြေးလမ်းပေါ် featured ပါပြီ။ 2014 ခုနှစ်တွင် Rihanna မိန်းမတို့အဘို့အားကစားနှင့် Sneaker ဒီဇိုင်း, Puma အဘို့ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာအမည်ရှိ၏။ "ကျနော်တို့ကအမြိုးသမီးမြားကိုတကယ်ဒီခြုံငုံအားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပိုဆိုးနှင့်ဦးဆောင်ခဲ့ကြပုံကို, အထူးသဖြင့်အတိတ်ကာလစုံတွဲနှစ်အတွင်း, မြင်ကြပြီ," Montagne မှာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအမြဲကြောင်းနှင့် Nike က Unlaced စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကယ်နှုတ်တော်မူသောအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အမှန်တကယ်စုဝေးရောက်လာကြ၏
ငါတို့သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးသမီးဖောက်သည်ကိုနားထောင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့သဘာဝအကူးအပြောင်းခဲ့ Sneaker အဘို့မိန်းမတို့အဘို့ကြောင်းဦးတည်ရာ ... ကျွန်တော်တို့ကိုရန် - နောက်ဆုံးမှာ။ " Montagne မှာအဆိုပါ၎င်း၏ယောက်ျားရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု outpaced ပြီ, Unlaced 2020 $ 11 ဘီလီယံ $ 6.6 ဘီလီယံရှိရာမှလည်းယင်း၏အားကစား Hijab သည်နှင့်ပေါင်း-size ကိုအားကစား wear ပါဝင်သောအဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့စီးပွားရေး, ၎င်း၏အမြိုးသမီးမြား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့ Nike ကရဲ့အလုံးစုံမဟာဗျူဟာ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် နှစ်အနည်းငယ်အတိတ်သူမကထပ်ပြောသည်။
Nike က၏ Courtesy Unlaced အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမြိုးသမီးမြား၏မညီမျှမှုမှမြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကြားတွင်ရောက်ရှိလာသည်။ 2016 ခုနှစ်တွင်ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြေးများနှင့်မကြာခဏအမျိုးသမီးများသည်မိမိကုသမှုများအတွက်ဝေဖန်သူကသမ္မတ Trump မှသူမ၏အရှုံးအောက်ပါအမျိုးသမီးတစ်ဦးစံချိန်တင်အရေအတွက်ကဒီနှစ်ရုံးများအတွက်အပြေးနေကြသည်။ အဆိုပါ #MeToo လှုပ်ရှားမှုကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ချေမှုန်းရေး၏နေရာအနှံ့မီးမောင်းထိုးပြခြင်း, အာဏာကသူတို့ရာထူးကနေအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ထင်ရှားတဲ့အထီးကစားသမားများကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ နှင့်အမျိုးသမီးတရားရုံးကို Nike ကရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း, သူတို့ကဖြစ်စေစိစစ်ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူး။ မတ်လ 15 ရက်နေ့တွင် Nike ကကအလုပ်ခွင်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ၏ပြည်တွင်းရေးတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ Nike ကယင်းတိုင်ကြားချက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့်တိုင်ကြားမှုများသို့မဟုတ်ဘယ်သူကို၏သဘောသဘာဝကိုသတ်မှတ်မရခဲ့ပေ။ (Montagne မှာမတ်လ 23 တွင်မတ်လ 14 ရက်နေ့တွင် TIME နှင့်အတူစကားပြော, Nike ကနေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနောက်ထပ်မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ) "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ဝေစုကြီးထွားပေမယ့်လုံးဝစျေးကွက်ကြီးထွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး ... ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တကယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ဝင်ရောက်ဖို့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်အမျိုးသမီးအားကစားယဉ်ကျေးမှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီခြင်းအားဖြင့်အားကစားတိုးချဲ့ကူညီရန်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Montagne မှာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့လုပ်နေတာကနေအရာအားလုံး - Nike က Unlaced ပါဝင်သည် - တကယ့်ကိုအရေးကြီးသောအချိန်မှာလုပ်နေတာကူညီဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ " သို့သော် Semmelhack Unlaced တူသောအစပျိုးအမှန်တကယ် Sneaker ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးပါမည်ရှိမရှိအံ့ဘွယ်သောအမှု။ "အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဖြစ်လာကြောင်းအရာ, ယောက်ျားကိုစားသုံးသူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ငွေကြေးကိုသမိုင်းကြောင်းအဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီ" လို့သူမကပြောပါတယ်။ "တစ်ချမှတ်နှင့်ပြွီးအမျိုးသမီးတွေအများအပြားဥပမာရှိခဲ့သည် '' ဝတ်စားဆင်ယင်၏အထီးပုံစံ။ '' ယောက်ျား Co-ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်စားဆင်ယင်တဲ့ '' အမျိုးသမီးပုံစံ '' ချမှတ်ဥပမာရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပြီ။ " Semmelhack ပြီးသွား: "ငါသည်လူဝတ်စေချင်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖိနပ်ရှိကြ၏လျှင်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအသစ်တခုအခိုက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ "
1980 hkunhait, Nike k mitekaal gyawdaanrae Air ko yaw daan myit lwhaatpayyraan nhaintaatuu "Sneaker yainkyaayymhu" ko hpw int kuunye payyhkaesai . "Sneakerheads" hcusaungg kaan bhawkyaw obsessive suutwayko tait u $ 1 bheleyan Sneaker Reseller payytae hcyaayykwat mwayhpwarr yanae aakuuaanyenae launghcar hkaekyasai . darpaymaae aamyoesameetway saminekyaunggahtwat kyaanhkae parpye . aasopar aarrkahcarraamhaattansiut Unlaced, denhait nhaawinnpinemaatl 27 raatnaek awanline hpya ant hkyai hkyinn nhaint hcatoesinemyarr twin lain maihuaamyoesamee Sneaker hkyitsuumyarr myarraatwat pyatite mhauu u tai rarnae fix hphoet myahaaw laint naypartaal . "Sneaker yainkyaayymhu aatwin gan hpinaut tait aamyarrhcu nhaint aatuu pyaဿnar myarreat aapine ko suuthoet samine mha sar youtyarr rae aarwalaahcarr aatwat r shinine hkae kya pye hpyitpartaal . Sneaker mhar yainkyaayymhu eat ht: dar kyount parwainsaungrwat raanaamyoesamee '' sneakerheads ''abhhoetahkaathkell hkaepartaal, " aelllait jabhaat Semmelhack, torwantorae Bata hpinaut pyatitenhaint Box koahtellk eat rayysarrsuu mhar aakyeetaann mhauu k pyawwpartaal . "Serena Williams har naetuu Fantastic aarayykyeesaw aamyoesamee aarrkahcarrsamarr, Sneaker yainkyaayymhu eat aahtwataahtiut mhar hpyit htite partaal . darpaymae suuthoet k mahoteparbhuu . htoaahkar ngar kyount aamyoesamee lolarrhcautlyain athleticism nhangya kyahanyaupya thoeteat ae eat raungpyan ng htainpartaal . " aahkutot tawtawmyarrmyarr kone aamhaattansiut taithkuko pyaungghphoet kyaoehcarrnaykyataal - pwaltaitpwalabhaalsuu aarr myahapokyee Nike k htaat shoetsaw lyinmyanhcwar pyumuushoetmahote po. po.ahcainasaathtaatpopyee activewear nhaint
aarrkahcarrhpinaut options myarr nhaint aatuu tainpya hkanr kya suu hpoutsai myarr soneshone rainsiner ramaal tae suu . Unlaced tait u hpyit lainmai " meinmathoetabhhoet hcatekuuyain Sneaker u tai rar ko," maye Montagne mhar, dusammatanhaint Nike k aamyoesameeaahpwalmha General Manager k pyawwpartaal . Unlaced pyeehkae saeet l k rae pellrait hpaatshin raatsattapaataatwin mhar htotehpaw pya s hkaeparsainhaint (Air ko gyawdaan nhaintlaytaut 1s lomyoe) Nike k raeaakyawkyarrsone Sneaker aahkyahoetkoaapaw unisex site puujaw par lain maal . i-D ko hpaatshin aaaldetargyauuleyar Sarr-Jamois tuusaw sya jar lwhammoemhu awanline nhaint hcatoesinemyarr nhait uhcaloneko run sawhtotekone curate mai, nhaint aamhaattansiut sai ၎inneat gan saintaannsarar aahkyahoetko pyan saannsait hphoet aamyoesamee dejinenarmyarr nhaint aatuu aalotelotehkae sirasai . "amyaoe samee myarr koaamyaell Sneaker kohkyit eat . kyanawthoet aarrkahcarr k nay lam mha myinnay partaal nhaint yahku, aamyoesamee Sneaker yainkyaayymhu k ae ko kambhar tait wham twin aashein myaha inthpyitpartaal "hu Montagne mhar k pyawwpartaal . " kyanawthoet k aamyoesameetwayko myarraatwat aatarraasee aahkyahoetko hpaalsharr partaal . " Nike keat Courtesy shoetsawabhaal kyountaamyoesamee Sneaker aakyeeaakellmyarr aarronehcitehphoet Nike k kaeshoet kyeemarr aamhaattansiut myarraatwat aalwan kyaar myint hkaetarlell 2005 hkunhaittwin kumpanewainrouthkaepyee 2014 hkunhaittwin aamyoesamee hceepwarrrayylotengaann kyaw hteinhkyaotemhu ko yuu taesuu Montagne mhar, aamhaattansiut aamyaell aamyoesamee aarrkahcarrsamarr waansaungmhupayy, darpaymaae hcatine pahchcaeemyarraahpyit Sneaker po rwayhkyaalhcarar puujaw lo hkae pyawwpartaal . makyaarsayyme nhaitmyarrtwin Sneaker aashisone aahtuu pyinsait aamhaattansiutCéline raelaytaut 1- mhuat swin hpinaut nhaintaatuu High- hpaatshin pyaylampaw featured parpye . 2014 hkunhaittwin Rihanna meinmathoetabhhoet aarrkahcarrnhaint Sneaker dejine, Pumaabhhoet hpaanteemhu darritetar aamai shieat . " kyanawthoet kamyaoe samee myarr ko takaal de hkyuanngone aarrkahcarr nhaint kyaanhkinerayy luunaymhu ponehcan hc tae posoe nhaint u saunghkae kya pone ko, aahtuu s hpyint aatate karl hconetwal nhaitaatwin, myin kya pye," Montagne mhar k pyawwpartaal . " kyanawthoet k aamyaell kyaunggnhaint Nike k Unlaced hcaung kyi hkae kya kaal nhuat taw muu saw aan sya hpwalahkwinalam aahpyit aamhaantakaal hcuwayyroutlarkyaeat - ngarthoetsai kambhartawham aamyoesamee hpoutsai ko narrhtaung hkae kya sakaeshoet sabharwakuuapyaungghkae Sneakerabhhoet meinmathoetabhhoet kyaungg u tairar ... kyawantawthoet koraan - noutsonemhar . " Montagne mhar aasopar ၎inneat youtyarr rae lotengaanntoetaatmhu outpaced pye, Unlaced 2020 $ 11 bheleyan $ 6.6 bheleyan shirarmha laee yainneataarrkahcarr Hijab sai nhaint paungg-size koaarrkahcarr wear parwainsaw aasopar aamyoesamee rae hceepwarrrayy, ၎inneatamyaoe samee myarr eat hceepwarrrayylotengaann kyeehtwarrhphoet Nike k rae aalonehcone maharbyauuhar eat tahcatetapine hpyittaallhoet suu kapyawwpartaal nhaitaanaeengaal aatate suumak htaut pyawwsai . Nike keat Courtesy Unlaced aamayrikaanpyihtaunghcu shiamyaoe samee myarr eat m nyemyahamhu mha myint aarrone hcuu hcite mhu kyarrtwin routshilarsai . 2016 hkunhaittwin helarrekalaintaanrae saminesinerar sammatarwaykoutpwal pyay myarr nhaint makyaarhkan aamyoesameemyarrsai mimi kusamhu myarraatwat wayhpaan suu kasammat Trump mha suumeat aashone aoutpar aamyoesamee tait u hcanhkyanetain aarayaatwat k denhait rone myarraatwatapyay naykyasai . aasopar #MeToo lhuutsharrmhuko aamyoesameemyarraapaw liinpinesinerar nhaaw int yhaat hkyinn nhaint hkyaaymhuann rayy eat nayraraanhaan meemaungg htoe pya hkyinn, aarnar k suuthoet rarhtuukanay aamyoemyoesaw hcaatmhulotengaann myarr aanhaan htainsharrtae aahtee kahcarrsamarr myarrko hpaalsharr payyhkaesai . nhaint aamyoesameetararrroneko Nike k rae noutsonehtote aarrhtotemhu shinaysawlaee, suuthoet k hpyithcay hcihcait hphoet kohkanhcwmaarr mahoteparbhuu . maatl 15 raatnaetwin Nike k k aalotehkwin laatmahkannine saw aapyuaamuu eat pyitwinrayy tinekyarrhkyet ko laathkanrashi hkaekyaungg aataipyu pyawwkyarrhkaesai . Nike k yainn tinekyarrhkyet s ant kyin hkae kya saeet tinekyarrmhumyarr shoetmahote bhaalsuuko eat sabhawsabharw ko saatmhaat marahkae pay . (Montagne mharmaatl 23 twinmaatl 14 raatnaetwin TIME nhaint aatuu hcakarrpyaww, Nike k nay pyawwrayysohkwinshi suu nouthtaut mhaathkyetpayyraan ngyinnsohkaesai . ) " kyawantawthoetrae raimhaannhkyet kyanawthoetrae hcyaayykwat way hcu kyeehtwarr paymay lonew hcyaayykwat kyeehtwarr hphoetmahoteparbhuu ... bhaalaarar ko kyawantaw takaal lotehphoet kyaoehcarr kyi wainrout hphoet aatarraaseetway ko hpaalsharr hkyinn nhaint luu aapaunggthoet sai kambharlone kyaw aamyoesamee aarrkahcarr yainkyaayymhu aasheinaahone myaha int kuunye hkyinn aarr hpyint aarrkahcarr toehkyaae kuunyeraan hpyitpartaal" hu Montagne mhar k pyawwpartaal . " kyanawthoet lotenaytar k nayaararaarrlone - Nike k Unlaced parwainsai - t k ae ko aarayykyeesaw aahkyanemhar lotenaytar kuunye upamar taithkuhpyitpartaal . " shoetsaw Semmelhack Unlaced tuusaw aahcapyoeaamhaantakaal Sneaker yainkyaayymhu ko popyee aarrlone parwainnine hpyitlaraaung kuunyepayypar mai shimashi aan bhwalsawamhu . " aamyoesamee titepwal hpyitlarkyaunggarar, youtyarrko hcarrsonesuu nhang aatuu ၎innthoeteat ngwaykyayko saminekyaunggasoneshone hkae raparpye" lhoet suumak pyawwpartaal . " tait hkyamhaat nhaint pyawee aamyoesameetway aamyarraapyarr upamarshihkaesai '' waathcarr sain yain eata htee ponehcan . '' youtyarr Co- wainrouthkyinn nhaint hcarr sain yaintae '' aamyoesameeponehcan '' hkyamhaat upamar shihkaesai m hotepye . " Semmelhack pyeeswarr: " ngarsai luu waat hcayhkyin kyaungg aamyoesamee hpinaut shi kyaeat shin kyanawthoet k ae ko aasait tahku aahkite hpyit lain maihu htainpartaal . "
#wafrice #esteem #good-karma #life